Iziko lendibano apho i-WWDC iza kubanjelwa khona liqala ukuhonjiswa | Ndisuka mac
NgoMvulo olandelayo sesinye seziganeko ezilindelweyo kubo bonke abalandeli be-Apple, umsitho apho abafana baseCupertino bazokwazisa zonke iindaba eziza kuvela kwisandla seenguqulelo ezintsha zeenkqubo zokusebenza zezixhobo zeApple: iOS, iwOSOS , tvOS, kunye neMacOS. Ngokungafaniyo neminyaka edlulileyo, endaweni yokubamba lo msitho kwiZiko leMoscone, Amakhwenkwe aseCupertino akhethe iziko lendibano laseMcEnery eliseSan José. Eli ziko lendibano liqalisile ukufumana umhombiso oqhele ukuhamba nezi ndibano.
Njengoko sinokubona kumfanekiso ongentla kweli nqaku, elinye lamacala sele libonisa ipowusta enomhlobiso ofanayo wesimemo nalapho sinokubona khona isicatshulwa seWWDC17. Iiflegi zakudala ezijikeleze amaziko endibano apho kubanjwa khona le nkomfa, iinkomfa ekukho kuzo ikakhulu abaphuhlisi, sele ziqalisile ukufakwa. Usuku lokuqala lwenkomfa Yenzelwe kuphela umsitho wokuvula apho iinkqubo ezintsha zenziwa khonaNgelixa iveki yonke izakunikezelwa kwizifundo phakathi kwabaphuhlisi abanethamsanqa abaye bakwazi ukufumana esinye sezimemo ezimbalwa ezikhoyo.
NgoMvulo olandelayo, iqela leSoy de Mac liya kuba sezantsi komgqomo ukukwazisa bukhoma ngayo yonke into eyenzekayo kumsitho wokuvula. Nje ukuba ugqibile, Siza kupapasha amanqaku ahlukeneyo nazo zonke iindaba ezibonisiweyo kulo msitho. Umnyhadala uzakuqala ngentsimbi yesi-19: 10.5 ngokuhlwa, ixesha laseSpain kwaye ukongeza kwiinkqubo ezitsha zokusebenza, kunokwenzeka ukuba iApple izakubonisa ngokutsha iMacBook, i-iPad entsha ye-XNUMX-intshi okanye iSiri Ekhaya okanye nantoni na Isixhobo ekugqibeleni sibizwa ngokuba siza kukhuphisana neAmazon Echo kunye neKhaya likaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iziko lendibano apho i-WWDC iza kubanjelwa khona liqala ukuhonjiswa